सेक्स रोबोटको प्रदर्शनी लण्डनमा » खबरहरुको एउटै केन्द्र
सेक्स रोबोटको प्रदर्शनी लण्डनमा
शुक्रबार, चैत्र ११, २०७३ ०६:४२ मा प्रकाशित !
११ चैत​, काठमाडौँ। रोबोटसँग सम्भोग गर्ने भन्ने कुरा सुन्दैमा अनौठो लाग्दछ तर दुनियामा यस्ता धेरै मानिसहरु छन जसले भविष्य सेक्स रोबोटकै भएको विश्वास गर्दछन ।
यो सँगै सेक्स रोबोटको क्षेत्रका वैज्ञानिकहरु लण्डनमा भेला हुँदैछन । जहाँ सेक्स रोबोट प्रविधिका विविध पक्षका बारेमा छलफल हुनुका साथै सेक्स रोबोटहरुको प्रदर्शनी समेत हुनेछ । आगामी डिसेम्बरमा लण्डनमा रोबोट सँग प्रेम तथा सेक्स गर्ने दोश्रो अन्तराष्ट्रिय कग्रेसको आयोजना गरिँदैछ ।
बढि अश्लील भएको भन्दै मलेसिया सरकारले आयोजनामा प्रतिबन्ध लगाएपछि आगामी १९ र २० डिसेम्बरमा सेक्स रोबोट पर्व लण्डनमा हुने भएको हो । गोल्डस्मिथ विश्वविद्यालयले यो सेक्स रोबोट पर्वको आयोजना गर्दैछ ।
समारोहमा मानवीय रोबोटदेखि लिएर टेलिडेल्डोनिक लगायतका विषयमा छलफल हुनेछ । अर्थात साइबरसेक्स टोयज देखि खुफिया इलेक्ट्रोनिक सेक्स हार्डवेयर लगायतका विषय छलफलका मूख्य विषय हुनेछन । विश्वविद्यालयका कम्प्युटिंग विषयका प्राध्यापक डाक्टर केट डेभलिनले छलफल सत्र संचालन गर्नेछन । उनले लेखेको इन डिफेन्स अफ सेक्स रोबोट नामक निबन्ध अहिलेसम्म विश्वमा ५ लाख भन्दा बढिले पढिसकेका छन ।
उनी भन्छन्, रोबोट भविष्यमा हाम्रो प्रेमजोडी बन्नेछ । के प्रेमलाई वैध बनाउन दुबैले दुबै सदस्यले समान व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने छ ?
निकट भविष्यमा रोबोट सेक्सले मानव सेक्सलाई उछिन्ने अनुमान कतिपयले गरेका छन । तर केही सेक्स रोबोट विज्ञहरुले भने रोबोटसँगको सेक्स कुलतको रुपमा विकशित हुनसक्ने र यसले मानिस मानिस बीच हुने सम्भोगलाई नै प्रतिस्थापन गर्नसक्ने जोखिम देखेका छन ।
अन्य विभिन्न प्रविधिहरुले मानवीय सिपलाई विस्थापित गरेजस्तै सेक्समा पनि रोबोटले मानिसलाई विस्थापित गर्नसक्छ । रोबोट विज्ञका अनुसार रोबोट सेक्स लतको रुपमा विकाश हुने जोखिम यसकारणले छ की सेक्सका लागि रोबोट जतिबेला पनि तयार हुनेछ र कुनैपनि बेला सेक्सका लागि इन्कार नगर्ने भएपछि सेक्सको लत स्वतः बस्नेछ । साथै रोबोटसँगको निरन्तर सेक्सले मानिसलाई चरम आनन्दको अनुभुति दिलाउनेछ र ऊ आफ्नो मानव पार्टनरसँग भन्दा रोबोटसँगै सहवासका लागि अघि सर्नेछ ।
तर कतिपय सेक्स थेरापिष्टहरु भने सेक्स रोबोटको प्रयोगले यौन जिवनलाई सुखदायी बनाउनुका साथै सुरक्षित सम्भोगलाई बढावा दिने बताउँछन । दम्पत्तिहरुबीचको सहमतिमा सेक्स टोय प्रयोग गरिएजस्तै सेक्स रोबोटको प्रयोग समेत सहमतीमा भएमा झनै सुनमा सुगन्ध हुने तर्क उनीहरुको छ ।बेलायतमा केही समयअघि यौनिक रुपमा सक्रिय झण्डै ३ हजार युवायुवतीमा गरिएको एक अध्ययनले के देखाएको छ भने अधिकांस युवायुवतीहरुले रोबोटसँग सेक्स गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहन्छन ।
रोबोटसँग सेक्स गर्न चाहने मध्ये ७२ प्रतिशतले यौन सन्तुष्टि प्राप्त हुने आशामा यसो गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए भने २८ प्रतिशतले नयाँ अनुभव हाँसिल गर्ने आकांक्षामा ।
विज्ञहरुका अनुसार सेक्स रोबोटको अर्को ठूलो फाइदा पनि छ ।
यसले सेक्स उद्योगमा ठूलो परिवर्तन ल्याउनेछ र यौनकर्मीहरुलाई विस्थापित गर्नेछ । यसले सेक्सका लागि हुने मानव बेचविखन तथा ओसारपसार र सेक्स दासीको समस्या पनि घटाउन सहयोग गर्नेछ ।
PREVIOUS POST Previous post: टाउको नभएको बच्चाको जन्मिने वित्तिकै मृत्यु
NEXT POST Next post: म्याग्दीको लागि ७२ वटा मतदानस्थल सिफारिस
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते शुक्रबार, चैत्र ११, २०७३ ०६:४२
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस शुक्रबार, चैत्र ११, २०७३ ०६:४२
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण शुक्रबार, चैत्र ११, २०७३ ०६:४२
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी शुक्रबार, चैत्र ११, २०७३ ०६:४२
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? शुक्रबार, चैत्र ११, २०७३ ०६:४२